Home » Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်တစ် (ABBA -The Winner Takes It All)
လင်မယား မဟုတ်တာကလွဲ လို့ သူငယ်ချင်း အရင်း တွေ လို ရှိနေကြဆဲ။
Gone Girl ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီးး အိမ်ထောင်ရေးး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးးတွေ ရေးးချင်နေတာ…
အနာဂတ်ဆိုတာ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာမို့ တချို့ဆို တစ်ဘ၀လုံးစာ စီမံကိန်းအကြီးကြီးချပြီး ကြိုးစားပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖြစ်မလာတာ၊
ကံစီမံရာလို့ ပြောရင်လည်း သဂျီးနဲ့တွေ့အုံးမယ်။
ဆယ်တန်း ဖြေတုန်းက အမေ ပြောဖူးတယ်။
. ကျေးဇူးကြီးပါ ဇီကလေးနဲ့ ချစ်မမ။
ငယ်တုံးက အဲဒီ ABBA အဖွဲ့ကို သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ။သူတို့ရဲ့ ရှေ့ B ကပြောင်းပြန်လေးလေ။ဘီနှစ်လုံးကျောကပ်လေး။
အမှန်ပါဘဲ။ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ လေ။ :-))
​လောကမှာဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးဒကာကြီး ဘာမှအတည်​မယူ​လေနဲ့
အိန်ဒေါင်ပြုရာမှာ အဝှာမပါ ဗိုလ်ဖျစ်မဲ ထင်သလဲ အယီးမုတ်ဆိတ်…
ကိုရွှေမောင်မောင်ဂီ – သူများ တွေ ကို မထိခိုက် အောင် တွဲ ရင်တော့ တွဲပါလေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲ အသဲမာ စေပေါ့။ မဟုတ်ရင် ငို ရလွန်းလို့ မျက်ရည်ဝယ် နေရဦးမယ်။
ကိုရွှေမောင်မောင်ကြောင် – အဝှါမပါလဲ ဟိုဒင်း ဖြစ်ရင် အလုပ်ဖြစ်မှာပါလေ။ (နှာတွေး မတွေးနှင့်)
မိသားစု တစ်ခု ဆိုတာ
.လူပျို ကြီးလောင်း ဦးမာဃ မကြာခင် အချစ်ဋီကာ ဖွင့်မည်။
. ပြုံး ရဲ့ လူပျိုကြီးလောင်း ဆိုတာ ကို သဘောကျလိုက်တာ။
တည်မြဲ ခြင်း ဘက်ကို များ ရောက်သွားလေမလား။
မှတ်ချက်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ဇီကလေး နဲ့ မမ ရေ။
(မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးလို မဖြစ်စေချင်သလို၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ဦးစံလင်း မဖြစ်စေချင်ဘူး တဲ့။)
ဥပမာပေးတာ ထိရောက်လွန်းလို့ သဘောကျတယ်။
အရင်တုန်းက အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်ပေမယ့် ခုတော့ သီချင်းတွေနဲ့ နည်းနည်းဝေးလား
.အဲ့တာကတော့“၀န်တိုခြင်း” ဆိုတဲ့ဟာပဲ.ခိခိ :)) :)) :))
အဲဒီ စကားလေးက …အကြောင်းပြလို့ ကောင်းလိုက်တာ…
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ.. လူ၂ယောက်က.. သဘောတူညီသတ်မှတ်ချက်တခုကို.. စာချုပ်စာတန်းနဲ့..ဒါမှမဟုတ်…. ဘေးလူတွေအသိအမှတ်ပြုချက်နဲ့ထားတာပါပဲ..။
မြန်မာတွေမှာ.. အိမ်ထောင်ရေးကို.. သိပ်ပြီး.. အလေးအနက်ထားလွန်းနေကြတာကိုက.. လူသားမဆန်.. လူယဉ်ကျေးမှုထဲနောက်ကျကျန်နေတယ်… လို့…. ထင်..။
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က အကြွေးရှိပုံမရဘူးလို့ ပြောခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို တစ်ခါတစ်လေ သတိရမိတိုင်း ကျေးဇူးတင်စိတ် ဖြစ်မိတယ် …